Alatsaho vy famoahana rivotra miditra tsimoramora - Sina Tianjin Tanggu TWT Valve
Alatsaho vy famoahana rivotra miditra tsimoramora
Ny dingana setroka dia malefaka, dia afaka manakana ny fisian'ny ny tsindry fiovaovan'ny na tranga hafa manimba. Air azo afaka ao amin'ny fantsona ny rano rehefa feno rano, ary azo nafindra toerana na ratsy tsindry eo amin'ny fantsona, toy ny rano fanadiovana fepetra tsangana dia tonga dia misokatra, ho any amin'ny fantsona mba hanafoanana ny ratsy tsindry. Hafainganam-pandeha avo mikoriana setroka mandatsa-dranomaso, ary na dia ny hafainganam-pandeha avo airflow voatsatso rano zavona dia tsy mahatonga ny setroka seranan-tsambo ho ...
Ny dingana setroka dia malefaka, dia afaka manakana ny fisian'ny ny tsindry fiovaovan'ny na tranga hafa manimba.
Air azo afaka ao amin'ny fantsona ny rano rehefa feno rano, ary azo nafindra toerana na ratsy tsindry eo amin'ny fantsona, toy ny rano fanadiovana fepetra tsangana dia tonga dia misokatra, ho any amin'ny fantsona mba hanafoanana ny ratsy tsindry.
Hafainganam-pandeha avo mikoriana setroka mandatsa-dranomaso, ary na dia ny hafainganam-pandeha avo airflow voatsatso rano zavona dia tsy mahatonga ny setroka seranan-tsambo ho mikatona mialoha. Ny hiainana no mihidy raha tsy rehefa tanteraka ny rivotra dia navoaka.
Na oviana na oviana, raha mbola ny rafitra tsindry dia ambany noho ny atmosfera fanerena, toy ny fisian'ny rano fanadiovana tsangana tranga, ny rivotra, dia avy hatrany miditra tsimoramora hanokatra ny rafitra ho amin'ny rivotra izy, mba hisorohana ny firongatry ny ratsy tsindry ao amin'ny rafitra. Mandritra izany fotoana izany, ny rafitra fotoana mivarina amin'ny fomba ara-potoana dia afaka hanafaingana ny tahan'ny mivarina.
Amin'ny alalan'ny fampiasana ny hafanana: -20 ℃ ~ 120 ℃
ampiharina size: DN25 ~ DN300
Connection fenitra: GB · Din · ISO · BS
Previous: Air famotsorana miditra tsimoramora
Next: Double orifce famoahana rivotra miditra tsimoramora
Alatsaho Iron Air Release Valve
mifaninana Cast Iron Air Release Valve
tsara Quality Air Release Valve
Pint-salantsalany Air Release Valve
Double orifce famoahana rivotra miditra tsimoramora
Sigle orifce famoahana rivotra miditra tsimoramora